Nhau dzeBhaibheri: Jesu Anochenura Tembere - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Jesu anenge ashatirwa kwazvo pano, haazati here? Unoziva here kuti nei ashatirwa kwazvo? Nokuti varume ava vari patembere yaMwari paJerusarema vanamakaro kwazvo. Vari kuedza kuita mari zhinji inobva kuvanhu vauya muno kuzonamata Mwari.
Unoona mikono miduku yose iyo namakwai nenjiva here? Eya, varume vari kutengesa mhuka idzi pano chaipo patembere. Unoziva here kuti nei? Nokuti vaIsraeri vanoda mhuka neshiri zvokubaira kuna Mwari.
Mutemo waMwari waiti kana muIsraeri akaita chakaipa, anofanira kuita chipiriso kuna Mwari. Uye paivawo nedzimwe nguva, apo vaIsraeri vaitofanira kuita zvipiriso. Asi muIsraeri aizowana kupi shiri nemhuka dzokupira kuna Mwari?
Vamwe vaIsraeri vaiva neshiri nemhuka. Saka vaigona kupira idzi. Asi vaIsraeri vazhinji vaiva vasina mhuka dzipi nedzipi neshiri. Vamwe vaigara kure kwazvo neJerusarema zvokuti havaigona kuuya nemhuka dzavo kutembere. Saka vanhu vaiuya pano ndokutenga mhuka kana shiri dzavaida. Asi vanhu ava vaidhurisira vanhu. Vainyengedza vanhu. Kunze kwezvi, havasaifanira kutengesera muno chaimo mutembere yaMwari.
Izvi ndozvinotsamwisa Jesu. Nokudaro anowisa matafura avanhu anemari achiparadzira mari yavo. Uyewo, anoruka tyava yorwonzi ndokubudisa mhuka dzose mutembere. Anoraira vanhu vanotengesa njiva kuti: 'Dzibudisei muno! Regai kuita imba yaBaba vangu nzvimbo yokuitira mari zhinji.'
Vamwe vavateveri vaJesu vanaye pano patembere muJerusarema. Vanoshamiswa nezvavanoona Jesu achiita. Zvino vanoyeuka nzvimbo iri muBhaibheri panoreva nezvoMwanakomana waMwari kuti: 'Kuda imba yaMwari kuchapisa maari somwoyo.'
Jesu achingunoveri muno muJerusarema achipinda Darikwo, anoita manenji mazhinji. Pashure pacho, Jesu anobva Judhea ndokuvamba rwendo rwake rwokudzokera Garirea. Asi parwendo rwake, anoenda nomuruwa rweSamaria. Ngatione chinoitika imomo.
Nei mhuka dziri kutengeswa patembere?
Chii chinogumbura Jesu?
Sezvaunogona kuona pamufananidzo, Jesu anoitei, uye anorayira varume vari kutengesa njiva kuti chii?
Vateveri vaJesu pavanoona zvaari kuita vanoyeuchidzwa nezvei?
Jesu anofamba nomuruwa rupi pakudzokera kuGarireya?
Verenga Johane 2:13-25.
Tichifunga nezvehasha dzaJesu pamusoro pevaichinja mari mutembere, ndeapi maonero akakodzera emabasa ezvokutengeserana muImba yoUmambo? (Joh. 2:15, 16; 1 VaK. 10:24, 31-33)
Mutemo waMwari waibvumira vanhu kutenga mhuka dzezvibayiro muJerusarema, saka nei Jesu akashatirirwa vanhu vaitengesa mutemberi?